Waa kuwee 'hablaha xulka ah' ee hurdada u diiday Trump? - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaWaa kuwee ‘hablaha xulka ah’ ee hurdada u diiday Trump?
Waa kuwee ‘hablaha xulka ah’ ee hurdada u diiday Trump?
Farriin uu usbuuci hore madaxweyne Trump uu boggiisa tweetarka soo dhigay oo uu haween ka tirsan aqalka Koongaraska Mareykanka uu ku yiri ‘dalalka ay ka yimaaddeen ha ku noqdaana’ waxaa ka dhashay cambaareyn iyo dhaleeceyn aad u xooggan.
Ms Ocasio-Cortez oo 29 jir ah waxay doorashadi xilliga dhexe ee bishi November si weyn uga guuleysatay musharraxa Anthony Pappas iyada oo noqotay gabadhi ugu da’da yareyd oo xubin ka noqoto aqalka koongreska.
Shahaadada koobaad waxay ka haysataa dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga ah iyada oo ka soo baxady jaamacadda Boston, waxayna ka soo shaqeysay arrimaha bulshada, wacyigelinta bulshada ka hor inta ay go’aansanin iney iisu soo taagto musharraxnimada aqalka koongareska.
Wareysi ay la yeelatay CBS News waxyar un kaddib marki loo dhaariyey xilka loo doortay, Ms Ocasio-Cortez waxay sheegtay “iney su’aal ka taagneyn” madaxweyne Trump inuu yahay cunsuri.
“Ereyada uu isticmaalo … waxay yihiin kuwa sarreynta midabka caddaanka ka tarjumaya, wuxuuna marar badan uu isticmaalaa hadallo cunsurinimo xambaarsan oo uu ka fiirsan” ayey tiri.
Waxaana marki dambe lagu qasbay iney raalli gelin ka bixiso gaar ahaan qoraallo Yuhuud neceyb ah oo ay boggeeda Tweetarka soo dhigtay Bishi Fabraayo, iyada oo dhaleecey u soo jeedisay ururka Aipac oo ay ku sheegtay iney siyaasadaha Israa’iil ay taageeraan.
“Yuhuud-neceybku waa mid jira waana u mahadcelinayaa xulafada iyo saaxibbada yuhuudda ee i baray taariikhda xanuunka badan ee ka soo horjeeda yuhuudda” waxay ka mid ahayd farriimaha ay boggeeda Tweetarka soo dhigtay.
Waxaa sida oo kale Ms Pressley aad loogu yaqaannaa iney ka hadasho dumarka loo geysto xadgudubyada jinsiga la xiriira sidi ay u heli lahaayeen taageero iyo dammaanad qaad noolaleed iyada oo boggeeda soo dhigtay “dadka xanuunkaasi xadgudubka dareema iney yihiin kuwa dadka kale uga dhow iney awood yeeshaan”.